Qarax Laga Maqley Markab ku Degay Xeebaha degmada Murcanyo - BAARGAAL.NET
Qarax Laga Maqley Markab ku Degay Xeebaha degmada Murcanyo
✔ Admin on June 26, 2017 0 Comment
Dadka ku dhaqan degmada Murcanyo ee gobolka Gardafuu oo qiyaastii 44 km u jirta magaalo madaxda gobolka ee Caluula ee Puntland ayaa ku soo waramaya inay arkeen Markab weyn oo ay u maleeyeen kuwa dagaalka oo qarxaya muddo ka dibna biyaha quusay.
Qaar ka mid ah kaluumeysata iyo dadka deegaanka oo ay VOA-du la hadashay ayaa sheegay inay u maleynayaan in qaraxa uu ka dhex dhacay markabka oo nooca dagaalka ah.
Waxey sheegeen in laba Markab oo kale oo kuwa dagaalka ah oo u soo gurmaday ay illaa iyo hadda taagan yihiin halkauu markabka ku degay oo Murcanyo u jirta ilaa iyo afar mile.
Ma cadda waxa dhabta ah ee qaraxaasi uu ahaa, waxeyse dadka deegaanku sheegeen inuu aad u xooganaa.
Kalluumeysata deegaankaa ayaa walaac ka muujiyay waxa dhacay, iyagoo ka cabsi qaba saameynta deegaankaa ay ka kaluumeystaan ay ku keeni karto, haddii sida ay sheegayaan uu noqodo Markab qarxay oo degay.
Dowlada Somalia oo lagu wareejiyay 68-gaadiidka Gaashaaman ee ciidanka (Daawo Sawirada)
Waxaa saakay dekadda magaalada Muqdisho ka dhacday munaasabad kooban oo dowlada federaalka Soomaaliya kula wareegeysay 68-gaadiid nuuca ...